Nodimandry i Rolland Seth Rasolondraibe – i am a malagasy in genève
11 septembre 2007 3 septembre 2008
Nodimandry i Rolland Seth Rasolondraibe
Tapa-peo aho andro vitsivitsy lasa izay, fa nitodi-doha aty an-tanindrazana vetivety, ka ny fihaonana amin’ny fiainana « tena izy » [real life] no makotroka, ny fifandraisana rohy Internet miadana rahateo.
Saika hampandre ireo tapaka sy namana amim-pahatsorana aho fa nodimandry tamin’ny Asabotsy 8 Septambra 2007, lasa teo tamin’ny 01 ora maraina, ingahy Rolland Seth Rasolondraibe mpamoron-kira sy mpanakanto, araky ny efa nampitain’i Diamondra antsika teto ihany.
Mirary fiononana feno eo ambany fitahian’andriamanitra hoan’ny fianakaviana navelan’Itompokolahy ary rehefa malalaka aho mametraka lahantsoratra lavalava.
Misaotra mialoha ireo hametraka hafatra no sady mangataka faharetana kely fa mamaly arak’izay fotoana ahitako « cyber » ihany aho 😉 hitodi-doha hianatsimo mantsy aho ka ny « backbone » dia mbola tetik’asa hatramin’izao.
[topazo-maso kely ange i Madagasikara >>]
Posté dans hira, izaTagué antokom-pihira, madagascar, madagasikara, madagaskar, malagasy, malgache, maty, rasolondraibepar tomavana5 commentaires
5 réflexions sur “Nodimandry i Rolland Seth Rasolondraibe”
12 septembre 2007 à 08:18
Misaotra anao tomavana nahatsiaro ity Ray niombonan’ny rehetra ity. Nahavita ny asany izy ka mino aho fa ny taranany no hitahiry izany talenta izany.
Mirary fiononana ho an’ny fianakaviana fa very mpanakanto ny Malagasy, indrindra ny Fiangonana rehetra niasany.
24 septembre 2007 à 11:51
araka ny nambarako tetsy ambony dia mbola hanoratra misimisy momba an-dRatompokolahy aho atsy aoriana kely.
voromandalo dit :
14 octobre 2007 à 15:45
Veloma ry mirakotra manga volon-danitra! very olo-manga tokoa ny tontolon’ny mpanakanto Malagasy.
14 octobre 2007 à 19:12
Mamy ny teninao ry Voromandalo ka isaorana fa mitondra fampiononana ny mandre fa tsy ny fianakaviana akaiky ihany no banga @ fahalasanany.
Misaotra koa amin’ny fitsidihana fa tsy nandalo fotsiny. Mankasitraka Tompoko 🙂
Ping: Fanamboarana ny Backbone any amin’ny RN7 « malagasy
← 07|09|08 – Kermesy sy Tombola ravahina dihy vakodrazana [Genève, CH]
Am-pilaminana ny fampitsaharana ireo « squats » tato ho ato →